30 Chikamu Chemunamato Pakuvhuna Joka | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Chikumbiro chemunamato Pakutyora joka
30 Chikumbiro chemunamato Pakutyora joka
Isaya 10: 27:
27 Zvino nezuva iro mutoro wake uchabviswa pamafudzi ako, nejoko rake pamutsipa wako, joko rinofanira kuparadzwa nekuda kokuzodzwa.
Joko mutoro usingadiwe wakaiswa pahupenyu hwako nadhiyabhori. Joko rinogona kuva remuviri kana remweya. Nhasi, ndine nhau dzakanaka dzekuti mumwe munhu arikuverenga chinyorwa ichi, joko radhiabhori roga paupenyu hwako rinofanira kuparadzwa nhasi muzita raJesu. Joko roga roga iro dhiabhori raakaisa pahupenyu hwako rinogona kutyorwa uye nhasi tiri kuita pamunamato makumi matatu pamatanho ekupwanya majoka. Patinenge tichiita minamato iyi nhasi, unosunungurwa kubva pajoko radhiyabhori muzita raJesu.
Ani naani Mwanakomana wemunhu akasunungurwa akasununguka zvechokwadi, ndinoda kuti uzive kuti Mwari haazombofa akaremedza vana Vavo nemajoko asingatsungiriki, maKristu mazhinji akasungwa kurwara, urombo, kutadza, zvipinganidzo, kushaya mbereko, kufa kusati kwasvika etc. Mwari haambofa akaisa mitoro yakadai pavana Vake, Dhiabhori ndiye mugadziri wemitoro yakaipa yega, kuti iwe uve wakasununguka kubva kunjanji idzi dzaSatani, iwe unofanirwa kuramba dhiabhori uye nekuita izvo kuti unamate wakasimba. Zviri kuburikidza neminamato kuti tinoisa dhiabhori pasi petsoka dzedu. Kana iwe uchida kukunda dhiabhori, iwe unofanirwa kuvhura muromo wako uye unamate, kana iwe uchida kuve chinhu chakapambwa kuna dhiabhori, iwe unokwanisa kuvhara muromo wako uye usingaite chero chinhu. Asi nhasi kana uchiita ino minamato yekupwanya joko, ndiri kuona Mwari vachikusunungura nhasi muzita raJesu. Jesu atora mitoro yako yose nemajoko uye akarovera pamuchinjiko, ipapo simbisa rusununguko rwako paatari yemunamato. Ndiri kuona satanic jeki arimo muhupenyu hwako akatsakatiswa zvachose nezita raJesu. Namata iyi minamato mukutenda nhasi uye uve wakasununguka.
1. Baba, ndinokutendai nekuda kwezita raJesu, iro rinofanira kupfugama ibvi rimwe nerimwe.
2. Ndatenda baba, nekuita gadziriro yekununurwa kubva kune chero rudzi rweuranda.
3. Ndinozvifukidza neropa raJesu.
4. Baba ndinzwireiwo tsitsi maererano nerunyoro rwenyu netsitsi nyoro muzita raJesu
5. Ini ndinomira uye ndinoramba muzita raJesu simba rese ringaedze kukanganisa minyengetero yangu nhasi.
6. O Ishe, zodzai maziso angu nenzeve, kuti vaone uye vanzwe zvinhu zvinoshamisa kubva kudenga.
7.Mweya Mutsvene, vhura zvakavanzika zvangu zvakasviba, muzita raJesu.
8. O Ishe, regai kuzodzwa kweMweya Mutsvene kupwanya joko rega rekudzoka muhupenyu hwangu.
9. Ropa raJesu, bvisa chidimbu chidiki chisina hunhu kubva muzvinhu zvese zvehupenyu hwangu, muzita raJesu.
10. Aiwa, Ishe, ndisikei ndiri mutsvene pamberi penyu, Muzita raJesu.
11. O Ishe, regai kuzodza kuzere pabasa rangu kuwire pamusoro wangu, muzita raJesu.
12 Nesimba raMwari, handishumire vavengi vangu; vavengi vangu vachandipfugamira, muzita raJesu.
13. Ini ndinodonhedza pasi nhare dzose dzakavakirwa kupikisa kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
14. Kutukwa kwese kwese kwaMwari pamadzitateguru angu, zvinokonzerwa nezvivi zvekunamata zvifananidzo, sunungura kubata kwako, muzita raJesu.
15. Ndinozvisunungura, kubva muhusungwa hwakagarwa nhaka, muzita raJesu.
16. Iwewe masimba ese, ari kuyamwa rugare rwezveramangwana rangu, sungwa, muzita raJesu.
17. O Ishe, tungamidzira ruzha runotyisa kumusasa wemuvengi wandakazvitangira, muzita raJesu.
18. Baba ishe, isa chisimbiso chako pachishamiso chese chawakaita muchechi ino, muzita raJesu.
19. Ndinoramba zvese zvakaipa zvine chekuita nekereke iyi uye ndinotambira hurongwa hwaMwari, muzita raJesu.
20. Ese masimba akaipa anopesana nekereke ino, tanga kusimuka kumirisana, muzita raJesu.
21. Ngirozi dzaMwari, dzivirira uye imise mabasa ese erima muchechi ino, muzita raJesu.
22. Ini ndinomirisana nemhando dzose dzekushungurudzika muhupenyu hweungano, muzita raJesu.
23. Ndakakanda pasi mafungiro ese akaipa pamusoro pevashumiri, muzita raJesu.
24. Chero simba, richirwisa chiratidzo chaMwari pamusoro pezveramangwana rangu, kupararira nemoto, muzita raJesu.
Yangu magumo, simuka nemoto utore zvinhu zvako, muzita raJesu.
26. Kurongeka kwese kwevaroyi nevaroyi kumatenga edenga, kwakagadzirirwa hupenyu hwangu, kupararira, muzita raJesu.
27. Ini ndinotora inishuwarenzi youmwari kumhuri yangu uye neni, pamhando dzose dzetsaona, muzita raJesu.
28. Ini ndinosimudza chamupupuri chaIshe kupurudza munhu wese akasindimara anoteverera, muzita raJesu.
29. Kese kuzodzwa kwakashata, kwakanangwa neni, pakaoma, muzita raJesu.
30. Iwe mweya wenyonganiso, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
Previous nyaya20 Kununura minamato yeVafundisi
inotevera20 Minamato Yekunamatira Kune Simba reMweya
mukristu Chikumi 24, 2020 Panguva ya7: 53 pm
Ndiri kufadzwa chaizvo nedzidziso dzako.
Divineglory Chikunguru 28, 2020 At 11:10 am
Urikuita zvakanaka, ini ndinonamata nePASTOR kuti kuzodzwa kwaMwari pauri kusazooma munaJesu Kristu zita. Ameni.
Iwe unogona zvakare kushanda pane ino musoro OH Mwari vhura maziso angu nenzeve kuti ndinzwe uye ndione.
Buyisile Kukadzi 6, 2021 At 11:07 pm
Izvi zvaindibatsira kwazvo. Zita raIshe ngarikudzwe
Minister Isaac Chivabvu 25, 2021 nenguva dza 5:53 pm
Ndiri kufara chaizvo nezvauri kuita munhu waMwari. Kuwedzera untion kushanda muzita raJesu
Allyson Chikumi 9, 2021 Panguva ya7: 20 pm
Ndiri kufadzwa nemunhu wako ane simba wekuzodza waMwari! Nyengeterera kununurwa kwemufundisi pano kuti b asunungurwe kubva mumaketani echivi uye avhurwe kutendeuka uye nehupenyu hwake hunoratidzwa.
Boateng Malik Chikumi 19, 2021 Panguva ya10: 04 pm
Ndinotenda iwe munhu waMwari.l kufambiswa nekuzodzwa kune simba nemashoko ako.Mwari vanokuropafadza zvikuru
Siya A Reply to Divineglory kukanzura mhinduro
5 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Nemusoro uye Sei
15 Minamato Yekunamatira Yekuputsa Zvisingaoneki Zvinotadzisa
Munamato wekurapa kwepamoyo shamwari
Minamato Yekunamatira Yekuzodza Kuti Excel